ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆေးရုံဆေးရုံဆေးခန်းသစ်အထီးကျန်မှုရပ်ကွက်ကွန်တိန်နာဆေးရုံကြီးသည်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုကိုင်တွယ်ရန်, အမိုးအကာဆေးရုံများနေရာတိုင်းမှာတည်ဆောက်နေကြသည်. အမိုးအကာဆေးရုံသည်ဖြည်းညှင်းစွာထုပ်ပိုးထားသောကွန်တိန်နာဖြစ်သည်. ထုပ်ပိုးထားသောကွန်တိန်နာသည်အမြန်တပ်ဆင်ထားသည်. ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြီးစီးပါပြီ 31 ထဲမှာကွန်တိန်နာ 10 ရက်ပေါင်း. ၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းနှင့်ခွန်အားကြီးမားသည်။